सास गन्हाउने समस्या र उपचार
प्रकाशित मिति: January 27,2017
हामी सामान्य टाउको दुखाइलाई पनि महत्व दिन्छौं । अलिकति कतै छाला नै खोस्रियो भने पनि उपचारको चिन्ता गर्छौं । तर जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मुख र दाँतको स्वास्थ्यमा भने त्यति धेरै ध्यान दिने गरेका हुँदैनौं ।
तर मुख र दाँतको स्वास्थ्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले दाँत र मुख स्वास्थ्यको ख्याल गरेनौं भने समयभन्दा अघि नै दाँत रोगी हुने र सास गन्हाउनेजस्ता समस्या सुरु हुन्छ । यतिमात्र होइन मुख र दाँत स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएन भने मुख र जिब्रोको क्यान्सरबाट बच्न सक्दैनौँ ।
सास गन्हाउने समस्या जुनसुकै उमेरका मानिसमा हुन सक्छ । बालबालिकादेखि नै कुल्ला गर्ने, दाँत माझ्नेलगायतका बानी बसाल्नुपर्छ ।
कारण . गिजामा पिप जमेर । . पिनास भएमा . पेटको समस्याका कारण -गिजा रोगी भएमा . दाँतमा खाना अड्केर सडेमा . जिब्रो सफा नगरेमा . पानीको मात्रा कम भएमा . धूमपान र मद्यपानका कारण . मिर्गौलाको समस्या छ भने .
फोक्सोको संक्रमणका कारण बच्ने उपाय . साँझ बिहान राम्रोसँग दाँत माझ्ने . जिब्रोको माथिल्लो भाग सफा गर्ने . कीरा लागेको र प्वाल भएको दाँतको उपचार गर्ने . खानेकुरा खानेबित्तिकै कुल्ला गर्ने .
प्रशस्त पानी पिउने . कब्जियतलगायतको समस्याबाट मुक्त हुने . दन्त रोग विशेषज्ञसँग उपचार र परामर्श लिने